ရန်ကုန် | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အစားသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for ရန်ကုန် ရှိ မှ အစားသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : အစားသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ
A Operation manager makes sure the restaurant runs smoothly. They hire and train staff following company policies. In addition, Operation Managers speak with customers about any concerns or problems, while also creating work schedules.
လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း 1